Burinta timaha, Timaha toosiyaha, Timaha toosiya caday - Tingxuan
Timaha Curler S201
Timaha toosiyaha HS-8006
Toosiyaha Timaha 579
Toosiyaha Timaha iyo Curler Curler W3392
Ningbo Tingxuan Qalabka korontada Co., Ltd.
Shirkadda Ningbo Tingxuan Electrical Appliance Co., Ltd. waxay ku iibisaa oo ku iibisaa jumladaha timo jarista iyo qurxinta alaabada iyo qalabka suuqa macaamiisha, kuna raaxeysata jago sare macaamiisha dhexdeeda. Shirkaddu waxay aasaastay xiriir wadashaqeyn muddo-dheer ah oo xasilloon oo lala yeesho dhowr dukaamo iyo wakiillo. Warshada qalabka korontada ee Ningbo Tingxuan waxay iibisaa alaabooyin kale oo timaha lagu qurxiyo iyo aalado leh noocyo dhameystiran iyo qiimo macquul ah. Waxaan ahmiyad weyn siineynaa amaahda, u hogaansamey qandaraaska, waxaan damaanad qaadeynaa tayada wax soo saarka, waxaanan ku guuleysaneynaa kalsoonida inta badan macaamiisha oo leh astaamaha howlgalka wanaagsan iyo mabda'a macaashka yar iyo dhaqsiyaha badan.
Waa kuwan tilmaamo tallaabo-tallaabo ah oo ku saabsan sida loo isticmaalo timo jaraha, timaha hagaajiyaha iyo burushka toosinta timaha.
SIDEE LOO ISTICMAALAA MADAXA Timaha Haddii aad isticmaaleysid curiyaha timaha dhaqameed, waa tan waxa la sameeyo. 1. Qabso qayb ka mid ah timaha. Abuur qayb ka mid ah timaha si aad u xoqdo. Qeyb yarta, curlku wuu adkeyaa. T ...
Taxaddarrada amniga ee isticmaalka qalabka guriga
Isticmaalka • Waligaa ha taaban qalabka korontada marka gacmuhu qoyan yihiin cagtuna qaawan tahay. # Xiro kabo caag ah oo caag ah ama caag ah marka aad isticmaaleyso qalabka korontada, gaar ahaan haddii aad ...
Warshadaha Shiinaha ee qurxinta iyo qurxinta ayaa loo horumariyay warshad ku lug leh dhinacyo badan oo kala duwan, oo ay ku jiraan timo jarista, quruxda dhaqanka, quruxda caafimaadka, waxbarashada iyo tababarka, o ...